LG G Flex2ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက် Androidsis
ကပွင့်လင်းလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နေစဉ် LG သည် CES 2015 တွင် LG G Flex ၏ဆက်ခံသူအဖြစ်ပြသမည်။ နောက်ဆုံးတော့တရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည် LG က G Flex ကို2သည်၎င်း၏ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအရည်အသွေးမြင့်တက်သော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
သတိပြုရမည့်အချက်မှာ LG G Flex2သည်ယခင်မော်ဒယ်လ်ထက်သေးငယ်ပြီးလေးလံသည်။ ပိုမိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလိုင်းများနှင့် ကဏ္ sector ၏အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေး၌ချီးမြှောက်ကြောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ, ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူများထံမှကွေးကောက်စမတ်ဖုန်းသစ်သည်အားကောင်းနေသည်။
1 တစ် ဦး က groundbreaking ဒီဇိုင်း
2 Full HD resolution ဖြင့် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်
3 တစ်ကယ့်ကိုအစွမ်းထက် terminal ကို
7 terminal ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
တစ် ဦး က groundbreaking ဒီဇိုင်း
LG G Flex2၏ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏ကွေးနေသောကျောဘက်တွင်ရှိပြီးအရည်အသွေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို၎င်း၏အချိန်ကာလအားလုံးမှဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်း၏လျှော့ချရှေ့ဘောင်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ မျက်နှာပြင် device ၏ရှေ့မျက်နှာပြင်၏ 74,39% ယူထားသော။
အသုံးပြုသူများသည် LG Flex ၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းခဲ့ကြပြီးအာရှကုမ္ပဏီကြီး၏ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်၎င်းတို့အားနားထောင်ခဲ့ပုံရသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် LG G Flex2သည် LG G3 အရွယ်အစားနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ တူညီတဲ့အလေးချိန်အပြင်၌။ ဤနည်းအားဖြင့်အရှည် ၁၄၉.၁ မီလီမီတာ၊ အရှည် ၇၅.၃ မီလီမီတာနှင့်အကျယ် ၉.၄ မီလီမီတာနှင့်အလေးချိန် ၁၅၂ ဂရမ်ရှိသည်။
G Flex ၏ထူးခြားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ၎င်းဖြစ်သည် ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ခြစ်ရာခုခံ။ ယင်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်သောသတ္တုဆေးသုတ်ထားသောအလွှာသည်ပျက်စီးသွားသောheatရိယာအားအပူထုတ်လွှတ်သောအရင်းအမြစ်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာရောက်ရှိသောအခါ၎င်းကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ LG G Flex2သည်ဤနည်းပညာကိုထပ်မံအသုံးပြုသည်။ သို့သော်ပြန်လည်ပြုပြင်ချိန်ကို ၁၀ စက္ကန့်ထက်နည်းသွားစေသည်။
Full HD resolution ဖြင့် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်
ပိုမိုကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားဖြင့် LG G Flex2သည်မျက်နှာပြင်သေးငယ်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဤကိစ္စတွင် LG မှယောက်ျားများသည် panel တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ထားသည် P- ၅.၅ လက်မ Full HD OLED resolution ကတော့ 1920 x 1080 pixels ရှိပါတယ်။
LG သည်ပြproblemနာတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် Gorilla Glass3panel ကို device ၏ curvature ကြောင့်ပေါင်းစပ်။ မရပါ။ အဖြေ? Corning ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ ်၍ LG's skid panel ကိုပြုလုပ်ရန်လျှို့ဝှက်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာကုသမှုပေးသည် Gorilla Glass 20 ထက် ၂၀% ပိုမိုအားကောင်းပြီးထိပ်ဆုံးတွင်လည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
တစ်ကယ့်ကိုအစွမ်းထက် terminal ကို
LG G Flex သည်သားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်သည် Qualcomm ၏ Snapdragon 810 octa-core ပရိုဆက်ဆာ 64-bit ဗိသုကာနှင့်နာရီအမြန်နှုန်း 2.0 GHz တပ်ဆင်ထားသည်။ ဗားရှင်းနှစ်မျိုးရှိသည်မှာ 16 GB သိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှုနှင့်2GB RAM နှင့်အခြားမော်ဒယ် 32GB GB ကိုသိုလှောင်မှုနှင့်3GB ရှိလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ microSD card slot ကသင့်ကို memory2TB အထိချဲ့ထွင်ပေးလိမ့်မယ်။ နီးပါးဘာမျှမ။
သင်၏မီးမောင်းထိုးပြ 3.000 mAh ဘက်ထရီ, ဒီကွေးသားရဲ၏အစွမ်းထက်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုထောကျပံ့ဖို့လုံလောက်တဲ့ထက်ပို။ သတိပြုသင့်သည်မှာ ၄ င်းသည်လျင်မြန်စွာအားသွင်းသည့်စနစ်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားမိနစ် ၄၀ မပြည့်မီတွင် terminal ၏ထက်ဝက်ခန့်ကိုအားသွင်းနိုင်စေသည်။
ဆက်သွယ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, G Flex2နှင့်အတူကြွလာn LTE အထောက်အပံ့, Bluetooth 4.1၊ Wi-Fia/b/ g / n / ac နှင့် NFC တို့ဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Android 5.0 L သည်ဤစမတ်ဖုန်းကိုကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ဖြင့်လှိမ့်ချပေးလိမ့်မည်။
LG သည် G3 ကို LG G Flex2တွင်ပေါင်းစပ်ထားသောတူညီသောစနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် 13 megapixel အဓိကကင်မရာ LES flash၊ လေဆာ autofocus နှင့် Optical Image Stabilization Plus (OIS +) တို့ပါ ၀ င်သည်။ ရှေ့ကင်မရာကို 2.1 megapixel selfie မှန်ဘီလူးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
LG G Flex ဟုယူဆနိုင်သည်ဆိုလျှင်ဤအမျိုးအစားတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒေတာအမျိုးအစားကိုမပေးပါ မတ်လလယ်၌စျေးကွက်ဝင်တိုက်ပါလိမ့်မယ်။ စျေးနှုန်းကတော့ဒီမှာပြောနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် LG G Flex ကိုယူရို ၇၉၉ နဲ့ရောင်းချခဲ့တာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးသူ့ရဲ့ဆက်ခံသူကအတူတူကုန်ကျမယ်လို့မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူပေါင်းလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့်ယူရို ၈၉၉ တောင်တောင်တက်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် …။
LG G Flex2ကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။ ၎င်း၏ယခင်ထံမှပြောင်းလဲမှုလုံလောက်သော?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G Flex 2: LG ကကမ္ဘာကြီးကို၎င်း၏ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ပါသည့်သားရဲကိုပြသသည်
Nydia terreforte ဟုသူကပြောသည်
အခု LG ကတုတ်ပေးလိုက်တယ်။
Nydia Terreforte အားစာပြန်ပါ
သားရဲတစ်ကောင် ... Pf lg ကသူမကိုပန်းခြံထဲကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။
Xiaomi Redmi2သည် Snapdragon 410 64-bit chip ကိုဒေါ်လာ ၁၁၉ ဖြင့်ပေးခဲ့သည်